Sidee loo ogaadaa in IPhone-ku asal yahay ama been abuur yahay oo aan lagu kadsoomin 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Waa suurtagal in la ogaado haddii iPhone-ku asal yahay ama been abuur yahay. Mulkiiluhu wuu eegi karaa IMEI (Aqoonsiga Qalabka Mobilada Caalamiga ah) ama wuxuu ku eegi karaa lambarka taxan websaydhka Apple. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira dhinacyo jireed oo gacan ka geysanaya in la garto in aaladda ay run tahay ama nuqul. Waxaa ka mid ah, shaashadda, tigidhada iyo astaanta.
Waa tan sida loo sheego haddii iPhone uu dhab yahay iyo in kale oo yaan lagu kadsoomin.
By IMEI iyo nambarka taxanaha ah
IMEI The (gaabinta in English for Aqoonsiga Kooxda Mobilada Caalamiga ah) waa lambar aqoonsi oo u gaar ah taleefan kasta oo gacmeed. Sidii oo ay ahayd dukumenti aqoonsi oo leh ansax caalami ah. Ma jiro qalab kale oo adduunka ah oo yeelan doona wax la mid ah.
Nambarka taxan waa lambar ka kooban xarfo iyo lambarro aruuriya macluumaadka ku saabsan aaladda, sida goobta iyo taariikhda la sameeyay, qaabka, iyo kuwo kale. Guud ahaan, waxaa laga heli karaa isla meelaha sida IMEI.
On iPhone asalka ah, xogtan waxaa laga heli karaa sanduuqa, jirka taleefanka gacanta, iyo nidaamka qalliinka.
Loo maqli karo / Apple
IMEI iyo nambarka taxan waxay ku xigaan barcode-ka sanduuqa qalabka. Hore u soco, waa la qori doonaa IMEI ama IMEI / MEID (1) waa (S) Sial Number (2), oo ay ku xigto tirooyin ama alfunabyo isku xiga. Xadhigyadan waa inay la mid noqdaan kuwa ka muuqda su'aalaha hoose.
Iyadoo loo marayo nidaamka
Si aad uga ogaato IMEI nidaamka, kaliya raac wadada Dejinta → Guud → Ku saabsan. Hoos u deg shaashadda illaa aad ka heleyso sheyga IMEI / MEID mi Nambarada taxan.
On iPhone laftiisa
IPhone kasta wuxuu leeyahay lambarka IMEI oo ka diiwaan gashan qalabka laftiisa. Goobtu way ku kala duwan tahay qaab ahaan. Intooda badan, waxaa laga heli karaa saxanka SIM-ga.
On iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE (jiilka 1aad), iPhone 5s, iPhone 5c, iyo iPhone 5, nuxurka waxaa lagu duubay dhabarka casriga ah. Waxaa laga heli karaa meel ka hooseysa ereyga. iPhone.
Timaha Aqoonsiga Apple
Waxaad ka heli kartaa websaydhka Aqoonsiga Apple adoo adeegsanaya biraawsar internet kasta. Kaliya gal faahfaahinta soo galidaada ka dibna hoos ugu dhaadhaca qaybta Qalabka. Dhagsii sawirka qalabka aad rabto inaad ku ogaato IMEI daaqaduna way furi doontaa.
Tirada ka sokow, macluumaadka sida moodel, nooc, iyo nambarka taxanaha ah ayaa la soo bandhigayaa.
Hab kale oo lagu ogaado IMEI waa adiga oo garaacaya * # kow iyo labaatan kumbuyuutarka qalabka. Macluumaadka waxaa si toos ah loogu soo bandhigi doonaa shaashadda.
Adeegga Hubi caymiska (Hubi caymiska)
Apple waxay leedahay degel ay isticmaaleyaashu ka eegi karaan xaaladda damaanadda Apple iyo u-qalmitaanka inay iibsadaan caymis dheeri ah oo AppleCare ah. Si tan loo sameeyo, waa inaad gashaa nambarka taxanaha ah ee qalabka.
Haddii iPhone uusan asal ahayn, lambarka lama aqoonsan doono. Haddii wax walboo hagaagaan, waxaa suurtagal ah in la ogaado haddii taariikhda iibsiga ay ansax tahay iyo haddii taageerada farsamada iyo dayactirka iyo caymiska adeegga ay firfircoon yihiin.
Nidaamka hawlgalka iyo codsiyada rakibay
Dhammaan iPhones waxay ku shaqeeyaan kaliya nidaamka macruufka. Taasi waa, haddii aad daarto qalabka oo uu yahay Android, shaki la’aan aaladda waa been abuur. Si kastaba ha noqotee, been-abuurayaasha ayaa inta badan adeegsada aalado u ekeysiiya muuqaalka barnaamijka Apple.
Xaaladaha noocaas ah, waxaa habboon in la hubiyo haddii taleefanku leeyahay codsiyo gaar ah, sida App Store, baaraha Safari, kaaliyaha Siri, iyo kuwo kale. Si aad uga takhalusto shakiga, waxaad ka eegi kartaa nooca macruufka ee goobaha.
Si tan loo sameeyo, raac jidka Dejinta → Guud update Cusboonaysiinta softiweer. Halkaas, isticmaaleha ayaa la soo gudboonaaday nooca nidaamka iyo macluumaadka ku saabsan, sida aaladaha is waafaqaya iyo wararka.
Iyada oo shaashadda ah
Taladani waxay si gaar ah ugu habboon tahay kuwa iibsada iPhone gacan labaad. Mararka qaarkood isticmaaleha ugu horreeya wuxuu dhaawici karaa shaashadda oo wuxuu ku beddeli karaa mid aan Apple ahayn ama mid shirkaddu xaqiijisay.
Laakiin waa maxay dhibaatada isticmaalka a Kormeerka taas oo aan asal ahayn? Soosaaraha aan Apple ahayn wuxuu sababi karaa iswaafajin iyo arrimo la xiriira wax qabadka, Tani waxay macnaheedu noqon kartaa khaladaadka ku jira taabasho badan, Kordhinta isticmaalka batteriga, taabashada aan qasabka ahayn, iyo dib u dhacyada kale.
Laga soo bilaabo iPhone 11 waxaa suurtagal ah in laga hubiyo asalka nidaamka. Si tan loo sameeyo, kaliya raac jidka Dejinta → Guud → Ku saabsan.
Hadaad aragto Fariin muhiim ah oo shaashadda ah. Suurtagal ma ahan in la xaqiijiyo in iphone-kani uu leeyahay shaashadda asalka ah ee Apple, Beddelka asalka ah lama adeegsan karo.
Dhinacyada kale ee jirka
Astaamaha qaar ee jirka aaladda waxay muujin karaan in IPhone-ku uu dhab yahay iyo in kale. Sidaas darteed haddii aad ka fekereyso inaad iibsato qalab Apple ah, waxaa muhiim ah inaad taqaan faahfaahinta qaarkood.
Tan iyo iPhone 7, Apple uma isticmaalin aaladaha madax-dhaqameedka ee taleefannada casriga ah, oo loo yaqaan P2. Sidaa darteed, waxaa suurtagal ah in la isticmaalo oo keliya kuwa leh isku xiraha nalka nooca danabka, waa isla kan u oggolaanaya dib-u-soo-buuxinta casriga. Ama moodello wireless ah, oo ku xiran Bluetooth.
Sidaas darteed haddii aad iibsatay iPhone cusub oo leh jaakad dhegaha la wadaago oo caadi ah, qalabku dhab maahan.
Dhammaan iPhone-yadu waxay leeyihiin astaanta caanka ah ee Apple oo ku taal dhabarka qalabka. Asalka asalka ah, markuu adeegsaduhu jiido astaanta, ma ogaanayaan wax farqi ah ama gargaar ah oo la xiriira dusha sare.
In kasta oo ay sii kordhayaan kuwa takhasuska leh, haddana way ku adag tahay soo-saareyaasha iyo soo-saarayaasha been-abuurka ah inay soo saaraan daabacaadda noocan ah. Sidaa darteed, natiijada badanaa waxay leedahay farqiga u dhexeeya dusha sare iyo sawirka Apple.
La soco faahfaahin dheeraad ah
Qalabku gacanta ayuu ku jiraa, waxaa macquul ah in la isbarbardhigo muuqaalkiisa iyo tilmaanta lagu sameeyay bogga Apple. Hubi faahfaahinta sida midabada loo heli karo tusaalahaas, booska badhamada, kaamirooyinka iyo biligleyga, iyo kuwa kale.
Shirkaddu xitaa waxay sharraxaysaa nooca dhammaadka. Sida "muraayadda la marsaday ee matte, oo leh qaab bir bir ah oo birta ku wareegsan", marka laga hadlayo iPhone 11 Pro Max.
Sidoo kale fiiri awooda la heli karo ee nooc kasta. Haddii aad bixiso 128GB iPhone X, taxaddar, ka dib oo dhan, taxanaha oo keliya ayaa leh xulashooyin leh 64GB ama 256GB.
Muxuu iPhone-ku lahayn
IPhones ma laha waxqabadyo caadi ah oo taleefannada casriga ah laga helo noocyo kale. Qalabka Apple malaha telefishin dijital ah ama anteenooyin muuqda. Sidoo kale ma haystaan ​​khaanad loogu talagalay kaararka xusuusta ama laba-sim.
Feejignaan: moodooyinka sida iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ama ka dib waxay leeyihiin shaqo jilitaan labalaab ah. In kasta oo ay haystaan ​​meel keliya oo hal jibbaar ah, kaar nano-SIM ah iyo kaarka elektaroonigga ah ee loo yaqaan 'e-SIM card' ayaa la adeegsadaa, taas oo ah nooca dijitaalka ah ee jabku.
Ka taxaddar qiimaha aad u hooseeya
Waxay umuuqataa xoogaa wax iska cad, laakiin marka dalabku aad ufiicnaado oo run la ahaado, waxaa muhiim ah in laga shakiyo. Haddii aad ka hesho iPhone qiimo aad u hooseeya dukaan gaar ah marka la barbar dhigo xarumaha kale ee lagu kalsoon yahay, noqo mid shaki leh.
Waxaa xusid mudan in aaladaha asalka ah qaarkood ay badanaa shirkadaha waaweyn ka iibiyaan qiimo jaban maxaa yeelay waa la muujiyaa ama waa la cusboonaysiiyaa, sidoo kale waxaa loo yaqaan dib loo habeeyay. Guud ahaan, dukaamadu waxay soo sheegaan sababta qiima dhimista.
Bandhig iPhone ah, sida magaca ka muuqata, waa mid la soo bandhigayay in muddo ah. Taasi waa, laguma ilaalin goobta wax iibsiga oo waxaa laga yaabaa inay leedahay calaamado qaar sababo la xiriira macaamilka ama isdhexgalka shaqaalaha.
Qalab dib loo cusboonaysiiyay waa mid ka mid ah, dhibaatooyinka qaar awgood, dib loogu celiyey soo-saaraha oo qaybaha dhibaatada ayaa la beddelay. Batariga iyo gadaal sidoo kale waa la beddelay. Guud ahaan waxaa loo iibiyaa ilaa 15% oo off waxayna leeyihiin dammaanad la mid ah casriga casriga ah.
Sida loo ogaado haddii iPhone-kayga dib loo qiimeeyo
Waa suurtagal in lagu ogaado nambarka nambarka. Si tan loo sameeyo, u aad Dejinta → Ku saabsan. Haddii nambarka nambarku ku bilowdo xarafka METRO, waxay ka dhigan tahay inay cusub tahay. Hadaad kubilaabato warqada F, Waa la dayac tiray.
Haddii si kadis ah aad u aragto warqadda P, waxay ka dhigan tahay in la gaaryeelay. Warqadda waqooyiga waxay muujineysaa inay siisay Apple si loogu badalo qalab cilladaysan.